Mayelana NATHI - Guangzhou MCM Certification ＆ Testing Co., Ltd.
Ubuncane Xhuma Kubukhulu
I-MCM inamathela isu lokuthuthukisa lokuthi amabhizinisi amancane kufanele aqhubeke nokwenza ngcono futhi akhuthaze amandla okuthi ekugcineni abe makhulu futhi angafisi impumelelo esheshayo. I-MCM igcina ukulingana kwayo futhi igxile ekunikezeni insizakalo yokuhlola nokuqinisekisa imikhiqizo ehlukahlukene yebhethri ngendlela engaguquguquki. Kungale ndlela kuphela lapho i-MCM ingabophezeleka kumakhasimende ayo futhi inikeze izixazululo ezinhle ngendlela ephikelelayo.
Inkampani yaseGuangzhou MCM yokuqinisekisa nokuhlola, yakhiwe yithimba elenza imikhakha eyahlukahlukene elidume ngokunikela ngezinsizakalo ezisezingeni lokuqala ekuhlolweni kwemikhiqizo yebhethri yomhlaba kanye nasezitifiketini. Njengenye yeqembu elizimele kakhulu elizimele leqembu lesithathu emkhakheni wokuhlola imikhiqizo yebhethri, sivunyelwe yi-CNAS, i-CMA, i-CBTL, i-CTIA ngokuya ngohlelo lokuphathwa kwekhwalithi ye-ISO / IEC 17025 & 17020.
LOKHO OKULETHWA I-MCM
Isisho esithi Konke kuhle ekuqaleni, kodwa bambalwa abazibonakalisa benjalo ekugcineni, kucashunwe encwadini ethi The Book of Songs, iqoqo lasendulo lezinkondlo zaseChina, bekuyinkolelo yeqembu le-MCM selokhu lasungulwa ngo-2003. kusishukumisela ukuba sigxile kakhudlwana phakathi kontanga. I-MCM inamathela kwimodi yesevisi egcina ithuthuka futhi iqina, kanye nokuphikelela ekwenzeni izinto ezintsha. I-MCM ihlale imangaza amaklayenti ngazo zonke izindlela. Ngaphezu kwalokho, i-MCM izosebenzela wonke amabhizinisi ngonembeza ngokuya ngokufunwa kwamakhasimende, inikeze insizakalo ephezulu ekusakazeni ukuhweba komhlaba wonke.